यस्तो छ तपाइको आजको भाग्यफल ? – kalikadainik.com
बुधबार, चैत्र ०२, २०७८ | ७:३५:४१ |
दाजुभाइमा असमझदारी बढ्न सक्छ। जिम्मेवारी थपिए पनि सहयोगीहरू पछि हट्नाले दु:ख पाइनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूले दु:ख दिनेछन्। व्यवसायमा सामान्य लाभ हुनेछ तर साेचेको दाम भने नउठ्न सक्छ। आफ्नाे लाभांशमाथि अरूले दाबी गर्न सक्छन्। प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर नठान्नुहोला। मिहिनेतले काम बनाउन सकिनेछ। शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्।
मिहिनेतले मानसम्मान दिलाउनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनुका साथै बौद्धिक क्षमतामा निखारता आउनेछ। बुद्धिको उपयोगले विद्या, धन आर्जन हुनेछ। तारिफयोग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ। बाेली–व्यवहारमा भने निकै सावधान रहनुहाेला। आलाेचकहरूले छिद्र खाेतल्ने प्रयास गर्नेछन्। सहयाेगी तथा साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुहोला।
बेसुरमा खर्च गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउनेछ। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन सक्छ। आर्थिक समस्या सुल्झाउन कर्जा लिनुपर्ला। सरसापटमा गएको रकम भने फिर्ता हुनेछ। केही खर्च लागे पनि यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। दिगो काम प्रारम्भ गर्न समयले साथ दिनेछ। टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नेछ। अपिरिचित व्यक्तिको विश्वास गर्दा धोका पाइनेछ।
मिहिनेत परे पनि कामकाे जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ। आवश्यक पर्दा सहयोगीहरूको साथ पाइनेछ। पहिले प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू स्वत: पछि हट्नेछन्। धार्मिक र सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। रोकिएको कामले पनि निकास पाउनेछ। लक्ष्यअनुसार समयमै काम सम्पादन हुनेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ।
केही खर्च लागे पनि खानपान तथा मनोरञ्जनको समय छ। भौतिक साधनले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनेछ। प्रयत्न गर्दा व्यापार बढ्नुका साथै व्यवसायमा लाभ हुनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले आम्दानी बढ्ने काम प्रारम्भ हुनेछ। अतिथिका रूपमा सत्कार पाइनेछ। व्यवसायको सन्दर्भमा यात्राको अवसर पनि जुट्नेछ। तर बलजफ्ती गर्ने बानीले समस्या आउन सक्छ।
अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा व्यावहारिक समस्या आउन सक्छ। स्वास्थ्यका कारण समयमा काम गर्न नसकिने हुँदा योजना अधुरै रहनेछ। आफ्ना कमजाेरीकाे फाइदा अरूले उठाउने चेष्टा गर्लान्। आश्वासन दिनेहरूले पनि झुक्याउन सक्छन्। फजुल खर्च बढ्नेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीबाट सजग रहनुहाेला। शुभचिन्तकहरूकाे साथ जुटाउने प्रयास गर्नुहाेला।
यस्तो छ तपाईको आज २०७८ साल असोज ०७ गते बिहीबारको राशिफल र पञ्चाङ्ग !
यस्तो छ तपाईको आज: जेठ १७ गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल !